My iPhone agaghị egwu ụda olu! Idozi! [Verizon, AT&T, & T-Mobile] - Iphone
esi ezipu ozi mmetụta ios 10
iphone na -amalitegharị ma ọ gaghị agbanwu
youtube agaghị arụ ọrụ na iphone m
ihuenyo iphone anaghị agbanyụ
My iPhone Agaghị Egwu Voicemails! Nke a bụ The Real Idozi N'ihi Verizon, AT & T, & T-Mobile.
Ozi olu anaghị arụ ọrụ na iPhone gị ma ị maghị ihe ị ga-eme. Ọ dị oke nkụda mmụọ mgbe ozi olu agaghị arụ ọrụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya ịkpọ oku ekwentị dị mkpa site na enyi ma ọ bụ onye otu ezinụlọ. N’isiokwu a, Aga m egosi gị ihe ị ga - eme mgbe iPhone gị agaghị egwu ozi olu ka ị nwee ike idozi nsogbu ahụ nke ọma.
Gịnị Dị Njọ na My iPhone? M Kwesịrị Kpọọ Onye Na-ebu M?
N'oge a, anyị enweghị ike ijide n'aka ihe kpatara iPhone gị agaghị egwu ozi olu. A na-akpọ ozi olu ozi ị na-akpọ na ngwa Ekwentị na iPhone gị Ozi Anya , nke na-ebudata ozi olu gị site na onye na-ebu gị n'ụdị obere faịlụ ọdịyo, nke yiri faịlụ egwu ị na-ege n'ime ngwa Music.
Mgbe ozi olu na-adịghị arụ ọrụ na iPhone gị, ọtụtụ mmadụ na-eche na nsogbu dị na onye na-ebu ikuku ha, n'ihi ya, ha na-akpọ ozugbo Verizon, AT & T, T-Mobile, ma ọ bụ ndị ọzọ na-akwado ndị ahịa nkwado hotline. Otú ọ dị, ọtụtụ oge nsogbu bụ n'ezie kpatara nsogbu ngwanrọ na iPhone n'onwe ya.
Ozi olu anaghị arụ ọrụ na iPhone? Nke a bụ ihe kpatara
E nwere isi ihe abụọ mere gị iPhone na-adịghị na-akpọ voicemails:
otu esi ewepu nchekwa sistemụ na mac
Gị iPhone anaghị ebudata ozi olu site na ụgbọelu ikuku gị ma ọ bụ
Ngwa ekwentị dị na iPhone gị anaghị arụ ọrụ nke ọma
Nduzi nsogbu anyị ga - enyere gị aka ịchọpụta ma dozie ihe kpatara ozi olu na - arụ ọrụ na iPhone gị!
Tupu Anyị Amalite
Tupu anyị amaba n'ime nchọpụta nsogbu usoro, jide n'aka na ị nwere Visual Ozi olu melite na iPhone gị. Mepee ekwentị ngwa gị iPhone na enweta Ozi olu na akuku aka nri nke ihuenyo. Ọ bụrụ na ị hụrụ “Iji weghachite ozi olu ozi mbụ setịpụrụ paswọọdụ na ekele” na ihuenyo yana bọtịnụ na-ekwu Melite Ugbu a , mgbe ahụ, edobeghị Ozi olu anya na iPhone gị.
Iji melite Ozi olu anya, pịa Melite Ugbu a . A ga-akpali gị ịbanye na ikwenye okwuntughe ozi okwuntughe. Ọzọ, ị ga-enwe nhọrọ ịhọrọ ndozi ozi olu ndabara ma ọ bụ dekọọ onwe gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdekọ ekele nke aka gị, pịa Omenala . Ozugbo ị banyere kere paswọọdụ gị ma họrọ ekele gị, ị ga-enwe ike ịnweta ozi olu ma lelee ha na ngwa Ekwentị.
Ntuziaka: can nwere ike ịlele ugboro abụọ iji hụ ma edobere ozi olu na iPhone gị site na ịkpọ oku na ịkpọ nọmba ekwentị gị na Igodo nke ngwa ekwentị, ma ọ bụ site na ịkpọ iPhone gị site na iji ekwentị ọzọ.
Ihe mere iPhone gị agaghị eji egwu olu - ndozi ahụ!
Mechie ma meghee App ekwentị
Dịka m kwuru na mbụ, otu n’ime ihe ndị kpatara na iPhone agaghị egwu ozi olu bụ n’ihi na ngwa Ekwentị anaghị arụ ọrụ nke ọma. Imechi na imeghe ngwa ekwentị na-enye ya ohere 'mechie' wee bido ọzọ, nke nwere ike idozi nsogbu software mgbe ụfọdụ.
kedu ihe iphone 6 m ji na -anwụ ngwa ngwa
Iji mechie ngwa Ekwentị, bido site na Pịa abụọ na Home button. Nke a ga-emepe App Switcher, nke ga-egosipụta ngwa niile ị mepere ugbu a na iPhone gị. Jiri mkpịsị aka gị wee swipe na ekwentị ngwa. Ga-amata na ekwenti emechiri ekwentị mgbe ọ pụtaghị ọzọ na App Switcher.
Mgbe ụfọdụ, na-enye gị iPhone a ọhụrụ mmalite site atụgharị ya na azụ na ọzọ nwere ike idozi a obere software nke. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na software nke gị iPhone jiri na ndabere, ọ nwere ike mere ka ekwentị ngwa na-malfunction.
Iji gbanye iPhone gị, pịa ma jide bọtịnụ ike ruo mgbe ị na-ahụ red ike na akara ngosi na slide ka ike gbanyụọ igosi na ngosipụta nke iPhone gị. Iji mkpịsị aka gị, slide akara ike ike ọbara ọbara site n'aka ekpe gaa n'aka nri. Chere ihe dị ka sekọnd 30 tupu ịgbanwuo iPhone gị, naanị iji jide n'aka na ọ kwụsịrị kpamkpam.
Abanye na gị Ikuku ụgbọelu na Akaụntụ Ma Gbanwee Ozi olu gị Paswọdu
Fọdụ ndị na-ebu gị chọrọ ka ịtọgharịa okwuntughe ozi olu dị ka nchedo mgbe ị nwetara iPhone ọhụrụ. Mgbe ụfọdụ, imelite ya aka na ntanetị ma ọ bụ site n'ịkpọ nkwado ndị ahịa nwere ike ịtọgharịa njikọ iPhone gị na sava ozi olu ma dozie nsogbu ahụ.
Ma echere m na Ozi olu iPhone enweghị Paswọdu!
Gị iPhone nwere ozi olu ozi olu olu, mana naanị ị ga-abanye ya otu ugboro na ọtụtụ iPhones ọhụrụ setịpụrụ ya na akpaghị aka. Otú ọ dị, a ka kwesịrị ịbụ ụdị ụfọdụ nke Nyocha n'etiti gị ụgbọelu na gị iPhone ibudata gị voicemails. Ọ bụ ezie na ịhụghị ya, okwuntughe ozi olu gị ka dị.
Etu aga - esi gbanwee Paswọdu ozi olu gị ọ bụrụ na Verizon bụ ụgbọelu gị
Nwere ike ịgbanwe ozi olu ozi olu gị si iPhone site n'ịkpọ oku (800) -922-0204 . ’Ll ga-erute menu ọrụ ndị ahịa akpaghị aka nke ga-enye gị ohere ịgbanwe paswọọdụ ozi olu gị. Iji mụtakwuo, lelee Verizon's nkwado isiokwu na isiokwu.
Etu aga - esi gbanwee Paswọdu ozi olu gị ọ bụrụ na AT&T bụ ụgbọelu gị
You nwere ike ịgbanwe okwuntughe ozi olu gị site na ịkpọ oku (800) -331-0500 site na iPhone gị. ’Ll ga-eru menu menu ndị ahịa akpaka AT & T nke ga-ajụ maka nọmba ekwentị gị na koodu zip na ịgba ụgwọ. Sekọnd ole na ole ka e mesịrị, ozi 'Paswọdu ezighi ezi - Tinye Ozi Okwuntughe' ga-egosi na ngosipụta nke iPhone gị. Tinye akara asaa ikpeazụ nke nọmba ekwentị gị ka ị gbanwee okwuntughe ozi olu gị. Ana m akwado gị ka ị gụọ AT & T's Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ nwere ike isiri anyị ike ịgbaso kpọmkwem isi iyi nke nsogbu ngwanrọ, yabụ anyị tọgharịa ha niile ntọala netwọk.
Iji tọgharịa Network Ntọala, na-amalite site na imeghe Ntọala ngwa. Na-esote, pịa General -> Tọgharia -> Tọgharia Ntọala Ntọala ma tinye passcode. Gị iPhone ga-tọgharịa ntọala ntọala na Malitegharịa ekwentị onwe ya.
Nsogbu ozi olu: Edozi!
’Ve dozie nsogbu ahụ na iPhone gị ma ugbu a ị nwere ike ige ntị na ozi olu gị ọzọ! Gbalia ihu na ndi enyi gi na ndi ezin’ulo gi mara ihe ha g’eme mgbe ekwenti iPhone ha gaghi egwu olu site na ikwuputa edemede a na social media. Daalụ maka ịgụ, ma nweere onwe gị ịhapụ ikwu okwu n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iPhone gị.